Ihe ngosi kacha mma na Tokyo | Akụkọ Njem
Muselọ ihe ngosi nka kacha mma na Tokyo
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Tokio
Kedu ihe kpatara na mgbe anyị na-aga anyị na-eleta ngosi nka ma anyi anaghi eme ya mgbe anyi no n’ulo? Ọ bụghị ihe niile, ọ bụ eziokwu, mana ọtụtụ mmadụ na-arara onwe ha nye na-eleta ụlọ ngosi ihe nka nke ha nwere mgbe ha na-eme njem na ndị obodo ha ma ọ bụ obodo ha amaghị. Eziokwu na-ejegharị.
Mụ onwe m abụghị ebe a na-edebe ihe ngosi nka ma agafeela nnukwu obodo na-enweghị ịdaba na ha naanị "n'ihi na ị ga-ama ya." Ọ bụrụ na ịnweghị ihe masịrị m, chefuo na m ga-egbu oge n'ime. E wezụga ole na ole, ọ masịrị m iji oge m na ihe masịrị m. Mana na njem m nke anọ na Tokyo n'afọ ọzọ enwere m ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, enweghị m ike izere ha ọzọ, yabụ etinye m batrị ahụ, emere m nyocha m ma lee m ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kacha mma na Tokyo:
1 Uralọ ihe nkiri Samurai
2 Ebe Nleba Mmiri
5 Halllọ Nzukọ baseball nke ama ama na ebe ngosi nka
Uralọ ihe nkiri Samurai
Onu ogugu nke samurai Ọ bụ kpochapụwo Japanese ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị, karịa etu sinima si egosi ya, mgbe ahụ ụlọ ngosi ihe nka a bara uru. Ọ bụ m ikpe na m na-ama na-na-akụ na-agụ manga si kpochapụwo Japanese oge. Ndị samurai nọ ebe ahụ ruo narị afọ asaa, rue mgbe njedebe nke shogunate, na oge Edo, na mbata nke ndị America na ndị Europe na-azụ ahịa.
Ha dị ọtụtụ ndị dike a ma ama samurai na akụkọ ntolite Japan, ezigbo nna-ukwu nke mma agha, yabụ ebe a ka ị ga-ama akụkọ a dum. Thelọ ihe ngosi nka nwere ala abụọ nwere ụlọ ngosi ihe ngosi. N’elu ala ulo ahia nwere ihe ncheta ma n’elu ulo ulo enwere ụlọ aghaee, ozo nwere mma agha, otu nke nwere okpu agha na otu raara nye oge Kamakura. Ihe dị ukwuu banyere ụlọ ihe ngosi nka bụ na Nwere ike "jiri akwa" dị ka samurai ma were foto.
Nke ahụ bụ, ịnwere ike itinye isi gị a Kabuto (okpu agha Japan ma ọ bụ okpu agha) na uwe samurai na ọbụna iburu katana. Daysbọchị ụfọdụ enwere mma agha duel ngosipụta. Enweghị ụgwọ ọzọ maka ọrụ abụọ a, so na ego tiketi.
Enwekwara nkuzi calligraphy ugboro abụọ n'izu, ọ bụ ezie na ị ga-ede akwụkwọ, yana mma agha mma agha Japan nke nwere ego dị iche nke 5000 yen (ihe dị ka $ 50).
Enwere ike ịkagbu ndoputa mana ọ bụrụ na ị kagbuo ya naanị otu ụbọchị ma ọ bụ obere tupu, a ga-ebo gị ebubo n'etiti 50 na 100% nke ọnụego ahụ. Lọ ihe ngosi nka dị na Shinjuku naanị 8 nkeji si ọpụpụ ọwụwa anyanwụ nke ọdụ JR ma ọ bụ 10 nkeji site na ọdụ ụgbọ oloko. Ọ na-emepe site na 10: 30 ruo 9 nke mgbede ma nwee nnukwu ebe nrụọrụ weebụ Bekee.
Ebe Nleba Mmiri
Otu n’ime ihe ndị dọọrọ mmasị m n’oge mbụ m banyere ụkwụ na Japan bụ otú ọnyà mmiri si maa mma. Ha nile nwere a ịbịaru, imewe, ọbụna agba. Idem akpa fi idem ndikụt mme utọ ntọt oro ẹsiwakde ndifụmi ke mme obio eken ke ererimbot.
E nwere ụdị niile, ụdị na agba. Obodo ọ bụla nwere nke ya ya mere, ị nwere ike ịse foto ha niile ma tinye ọnụ nnukwu ọba. Enwere ọtụtụ ndị njem nleta na-ese foto nsị na naanị nke a nwere ike ime na Japan.
Muselọ ihe ngosi nka a, Fureai Gesuidokan, emi odude ke edem usoputịn Tokyo, ma hiwe ya mgbe eburu ihe mgbaru ọsọ ahụ maka ịbanye nke usoro nsị iji ruo 100% mkpuchi. Ọ bụ na 1990. Nnukwu usoro a zoro ezo 25 mita miri emi na ụlọ ihe ngosi nka na-ekpughe otu esi wuo ya, ihe eserese ya bụ, otu esi ejikọ ụlọ na ihe ndị ọzọ. Ntinye bụ n'efu.
Mana ọ bụghị naanị ụlọ ngosi ihe nka nke ụdị ya. Na Odaiba enwere ozo yabụ ọ bụrụ na ị gaa agwaetiti a mmadụ mere na Tokyo Bay (ị nwere ike ịmasị foto dị n'akụkụ ndụ Gundam), ị nwere ike ịga leta ya. Ọ gbasara Egwurugwu Mmiri Ncha. Ga-enwe ike ihu otu sistemu si arụ ọrụ, nfuli mmiri, drains, ụlọ nchịkwa etiti, ụlọ nyocha nyocha mmiri.
Chọta ya dị nso na ọdụ Yurikamone Odaiba-kaihinkoen. Dị ka ego bụ echiche nke Tokyo Skytree, n'ọnụ mmiri na ọbụna Ugwu Fuji n'ebe dị anya.
Masịrị ya origami, nka nka ji aputa ihe aputara? Ya mere, nke a bụ nleta mbụ. Ọ bụ ihe ngosi center na ụlọ ahịa na ogbako gụnyere raara nye origami. Ga-enwe ike ịhụ ndị ọkachamara nke nka nka na akwụkwọ Japanese, washi, na ọbụnadị mepụta ihe nke aka gị, leda anya na ị advicea ntị na ndụmọdụ sitere na onwe ha.
Ọ bụkwa ezigbo ebe mụta akụkọ ihe mere eme nke nkà a, mmalite ya, ụkpụrụ ọma kedu ihe nọ na nsogbu, the usoro omenala na nke oge a. Eziokwu, ebe mara mma, yabụ omenala ndị Japan na ị ga-enwe ahụ iru ala.
Ọ dị na 1-7-14 Yushi ma, Bunkyo ku. Nwere ike ịga ebe ahụ site na Chuo ma ọ bụ Sobu akara, ịpụ na ọdụ Ochanomizu. Ogbe ndịda bụ naanị ije ije nkeji asaa site na ọdụ ọ bụla. Ọ dịkwa nso, agbanyeghị nkeji iri na ise, site na ọdụ ụgbọ oloko Marunouchi Line. Ọ na-emepe site na 15:9 nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede wee mechie n'oge ezumike na ọkọchị n'oge Ọhụrụ. Enweghị ego mbata.
Aha ogologo, mana ebe ọ bụ n'otu mpaghara ahụ dị ka ụlọ ahịa origami m gbakwunyere ya na ndepụta ahụ. Nnụnụ abụọ nwere otu nkume. Nke a na ụdị ihe ngosi nka bụ mgbe niile na-akpali ya mere ọ na-agba ka ị na-eme a njem site na akụkọ ihe mere eme nke mpụ na ụdị ntaramahụhụ n'ụbọchị ndị ahụ ihe ndị ruuru mmadụ adịghị. Na Japan na ụwa yabụ otu n'ime ihe kachasị egwu bụ French guillotine ma ọ bụ Iron Lady nke Nuremberg.
Lọ ihe ngosi nka a na-arụkọ ọrụ yana ndị ọzọ abụọ, nke Ngalaba Nkà Mmụta Ihe Ochie na nke Ngalaba Ngwongwo nke otu mahadum. Ha dị na 1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku. Tokyo Ga-apụ na ọdụ Ochanomizu, ọ ga-emepe site na 10 ruo 5 na mgbede na Rancebanye bụ n'efu ma emeghe.
Halllọ Nzukọ baseball nke ama ama na ebe ngosi nka
Na njem ikpeazụ m, otu n'ime asọmpi mba nke baseball ndị mmadụ na-anụkwa ọkụ n’obi. Nke mere na m mechara bụrụ onye na-akwado Hiroshima Carp ka m wee nwee nrọ ịga hụ ha dị ndụ.
Mara ihe niile akụkọ baseball nke Japan ị ga-abịa ebe a, na Tokyo Dome. Thelọ ihe ngosi nka bụ nke mbụ ụdị ya na mba ahụ wee meghee na 1959. Ọ dị n'akụkụ ama egwuregwu Korakuen bụ nke mecca nke Japanese baseball na nke mechara bụrụ na 80s. Tokyo Dome. Taa ụlọ ihe ngosi nka buru ibu okpukpu abụọ ka ọ dịbu.
N’agbata Machị na Septemba, ọ ga - emepe n’abalị iri rue elekere isii nke ụtụtụ wee ruo n’etiti Ọktoba na Febụwarị site n’elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede. Ntinye bụ 600 yen. Not nwere ike ịkwụsị ịzụ ihe na Ulọ ahịa ihe ncheta. Olee otu i si eru ebe ahu? Ọ bụ site na metro. Can nwere ike iji JR Chuo Lines, Toei Mita ma ọ bụ Toei Eh-edo, Marunouchi ma ọ bụ Nanboku. Chọta ebe ngosi ihe nka dị n'akụkụ ọnụ ụzọ 21 nke Tokyo Dome.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Muselọ ihe ngosi nka kacha mma na Tokyo
Obodo 5 mara mma na Rías Baixas nke Galicia
Ndetuta ọkpụkpọ kachasị mma mgbe ị na-eme njem